वर्षायाममा माछा खानु हानिकारक, कसरी छुट्याउने ताजा र बासी ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > वर्षायाममा माछा खानु हानिकारक, कसरी छुट्याउने ताजा र बासी ?
पोष्ट गरिएको असार. ११, २०७८ मा ३:३० मध्यान्ह असार ११, २०७८
काठमाडौं । नेपालजस्तो कृषिमा आश्रित मुलुकका लागि कृषिक्षेत्रको विविधीकरणका लागि माछापालन एक महत्वपूर्ण साधनको रुपमा लिइएको छ । मत्स्यपालनले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रोजगारी, उद्यमशीलता तथा आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ ।
माछापालनप्रति कृषकको संलग्नता दैनिक रूपमा बढिरहेको भए पनि अर्कातर्फ माछाको खपतलाई नेपालमा उत्पादित माछाले मात्र पर्याप्त उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । यहाँ खपत हुने माछाको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउने गरेको छ ।
त्यसैले हामीले माछाको उत्पादन बढाउन अब ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ । नेपालमा उत्पादित माछाको अधिकांश उत्पादन तराईका जिल्लाहरूमा केन्द्रित रहे पनि नेपाल चिसोपानीको धनी देश भएकाले चिसोपानीमा हुने माछाको व्यावसायिक खेती गर्ने ठूलो सम्भावना पनि रहेको छ ।
नेपालमा बिहे भोजदेखि लगायत अन्य परिकारमा माछा नै रुचाउनेको संख्या धेरै रहेको छ । नेवारी परिकारमा माछालाई शुभसाइतको रुपमा नै अगाडि सारिन्छ ।
तर माछाको सौखिन हुनुहुन्छ भने यो मौसममा ख्याल गर्नुहोस् । वर्षायाम माछाको प्रजनन समय हो । यो वेला माछा नखाँदा राम्रो हुन्छ । खानु नै छ भने राम्रोसँग सफा गरेर र पकाएर खानुपर्छ ।
धेरैलाई माछा निकै मिठो लाग्छ तर यदि तपाईंलाई वर्षायाममा माछा खान मन लागेको छ भने एकपटक सोच्नुहोस् किनभने यसको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ । माछामा अत्यधिक मात्रामा ओमेगा–थ्री फ्याटी एसिड हुन्छ । तर पनि वर्षायाममा यसको सेवन निकै हानिकारक हुनसक्छ ।
कसरी छुट्याउने ताजा माछा
१ ताजा माछाको मुख जोडिएको हुन्छ, बासीको भने आँ परेको हुन्छ ।
२ कलेजो रातो भए त
क्लाउड पत्रिका असार ११, २०७८
साताको शेयर बजार: परिसूचक २८४३ विन्दुमा, ४९ अर्ब १२ करोडको कारोबार